Sina HELLO II Lithium Battery Battery Tattoo Pen Manamboatra sy Factory | MOLONG
Lanja milanja: boribory: lanja 209g: 345g
Size: 153 * 32mm, (31.5-32.5mm ho an'ny fizarana tànana)
Fonosana: penina tombokavatsa bateria lithium + tadin'ny herinaratra USB
Loko: volamena mainty manify
Rafitra: batterie lithium namboarina, penina tombo-tsoa tafiditra, ny afovoany dia azo esorina mba hisolo ny tapany ambony amin'ny bateria lithium;
Azo ampiharina: 1. Tariby data USB Android 2. Ny ankamaroan'ny fanjaitra mitentina eny an-tsena (Cheyenne habe mahazatra) 3. Tsy misy lohan-tsofina amin'ny fikirakirana, azonao atao ny mampiasa mivantana ny lohan'ny telefaona finday;
1. Kalitaon'ny fitaovana: firaka aliminioma;
2. Fomba: CNC sokitra tsara voasokitra;
3. Fifanarahana fiampangana: Fifanarahana tariby USB Android;
4. Fahafahana bateria: 1800mA;
3. Fotoana famandrihana: fiampangana haingana, azo iampangana tanteraka ao anatin'ny 1.5-2 ora tsy misy herinaratra;
3. Ampiasao ny fotoana: ny 2.0 output amin'izao fotoana izao dia 2.0A, eo ambanin'ny voltage 8V mahazatra, afaka miasa tsy tapaka mandritra ny 7 ora mahery izy, miorina tsara ny herinaratra ary azo ampiasaina mandritra ny adiny 8 eo ny fampiasana azy;
4. atiny fampisehoana LCD: manisa ny ora fiasana (manisa ora iray minitra) + voltase famoahana tarehimarika roa + fahaizan'ny bateria;
5. Motera: motera tsy mitandrina (revolisiona 9V12000);
6. Halaviran'ny dia: 0-0.35mm;
7. Fanombohana herinaratra: miaraka amin'ny asan'ny fahatsiarovan-tena, ny fanombohana herinaratra dia ny sandan'ny volt aarin'ny farany;
8. Fiasa malefaka miasa: 5-12V;
Ny fitaovana dia penina tombokavatsa misy bateria lithium namboarina, izay azo ampiasaina mivantana tsy misy tadin'ny pedal sy hook. Izy io dia misy ampahany roa: 1. Ny tapany ambony amin'ny famatsiana herinaratra bateria lithium 2. Ny tapany ambany amin'ny penina tatoazy; ny tapany afovoany dia azo esorina mba hisolo ny tapany ambony amin'ny bateria lithium, ny fiasa manokana dia toy izao:
1. Aleo ny herinaratra: tsindrio lava ny bokotra "O" afovoany mandritra ny 5 segondra mba hirehitra, ary avy eo tsindrio lava mandritra ny 5 segondra mba hamonoana;
2. Fiatoana: Mandritra ny asa mahazatra, tsindrio fohy ny fanalahidy "O" hampiatoana ny asa, ary avy eo dia tsindrio indray ny fohy mba hamerenana ny asa;
3. Ampifanaraho ny herinaratra: ampifanaraho ny elanelan'ny herinaratra amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra "+" na "-", ary ahodino ny 0,5V isaky ny mandeha, ny herinaratra farafahakeliny: 5V, 12V ny tady ambony indrindra;
4. Fampisehoana bateria: Aseho amin'ny efijery LCD izy, fenoina hatramin'ny sela 4 izy rehetra, ary mila ampidirina ny bateria rehefa sisa ny sela farany;
5. Fampandrenesana isan'andro: seranan-tsambo fampandehanana ivelany, ampiasao tariby data USB Android hiampangana;
6. Fiantohana bateria lithium: antoka herintaona, ny antsasaky ny batterie lithium dia azo vidiana misolo ny fanoloana;
Previous: Silipo malefaka fiofanana lehibe ho an'ny vatana Kanto vita amin'ny artifisialy malemy
Manaraka: 30mm Gradient loko azo amboarina Tattoo Cartridge Grip
Masinina penina vita amin'ny tatoazy mamirapiratra, maotera 22 * ​​25 Coreless
Penina tatoazy bateria an'ny trito II Lithium